Rabitaanka galmada: noocyada, sifooyinka iyo talooyinka | Ragga Stylish
Dadka badankood ayaa isku qalda rabitaanka galmada leh rabitaan iska yimid. Rabitaanka lama filaanka ah waa mid si lama filaan ah u soo kordha una horseeda galmo galmo xamaasad weyn leh. Waxaa jira noocyo kaladuwan oo rabitaan galmo ah iyadoo kuxiran xaaladaha aan isku helno iyo cidda aan lajoogno.
Qodobkaan waxaan kuugu sheegeynaa wax walboo aad u baahan tahay inaad ka ogaato noocyada kala duwan ee rabitaanka galmada, astaamahooda iyo waxa la sameeyo marka ay dhibaatooyin ka jiraan.
1 Noocyada rabitaanka galmada
2 Goorma ayaa la walaacaa
3 Tilmaamaha lagu soo celiyo rabitaanka galmada
4 Dhiirigelin iyo isku kalsooni badan
Noocyada rabitaanka galmada
Rabitaanka siyaabo badan ayaa loo fahmi karaa. Waxaa jira nooc ka mid ah rabitaanka galmada oo bilaabi kara marka xiriirku uu durbaba xasilloon yahay lammaanahuna aysan weli la kulmin heerkii ugu horreeyay ee jacaylka. Dad baa jira Ma lihid rabitaan ah inaad bilowdo galmo la'aan jawiga saxda ah ee loogu talagalay. Si kastaba ha noqotee, marka dhunkashada, salaaxida iyo xiisaha ay bilaabaan inay soo muuqdaan, rabitaanka galmada ee aan horay u jirin ayaa soo bixi kara.
Inta badan, rabitaankan waa la dhayalsan karaa marka loo eego kan kale, kaas oo ah midka aan u aragno in si cad loogu muujiyey warbaahinta iyo filimada. Rabitaanka ugu badan ee haweenka wuxuu la xiriiraa midka la soo saaro marka ay jirto jawi ku habboon. Waxay si gaar ah ugu dhacdaa haweenkaas kuwa ku jira xiriirka muddada-dheer ee monogamous.
Rabitaanka galmada oo hooseeya badanaa waa la tarjumaa oo libido yarida ayaa si khaldan loo aaneeyaa. Waa inaad aragtaa sida aad u muujiso rabitaankaaga inay is bedeshay oo aysan jirin wax tayo leh oo ka badan baahida tirada ee rabitaankan. Had iyo jeer waxay kuxirantahay shay ama dhaqan aan rabno. Si la mid ah in ninku bilaabo inuu yeesho dhibaatooyinka kacsiga, waxaa laga yaabaa inay jiraan dumar badan oo ku hoos nool cadaadis iyagoo waajib ku ah inay galmo sameeyaan.
Goorma ayaa la walaacaa
Waxay noqon kartaa in ficilada qaarkood xilliyada qaarkood ee nolosha kaliya aysan dareemayn sida. Ogow goorta aad walwaleyso. Markay shimbiraha in ka badan ama ka yar xasilaan waqti ka dib oo ay u bilaabato inay ku abuurto raaxo darro qofka qaba rabitaanka ugu yar waa goortaad bilaabi lahayd welwelka. Haddii aan rabitaan galmo oo hooseeya yeelanno, rafiiqayagu wuxuu bilaabi karaa inuu dareemo rabitaan ka yar iyo in wax waliba aysan u socon sidii loogu talagalay Waxay ku jirtaa xaaladan markii aan bilaabayno inaan dalbanno oo ka dalbanno nafteena inaan galmo sameyno.
Waxyaalahan oo dhami waxay naga dhigayaan inaan doonayno xitaa wax kayar waxaanan galaynaa looxyo keena doodaha iyo guud ahaan jirro. Helitaanka raaxo-darradu waxay naga dhigeysaa inaan yeelano cilaaqaadyo yaraada iyo inaan leenahay rabitaan yar inaan yeelano. Sidaa darteed, dad badan ayaa la yaaban waxa la sameeyo si loo ilaaliyo rabitaanka galmada sare. Waxaa jira dhowr daraasadood oo aad u xiiso badan oo tilmaamaya sida xiriirka si wanaagsan loogu ilaalin karo heerkiisa erotic wanaagsan. Ugu dambeyntiina, waa inaan diirada saarnaa rabitaanka meel kale marka laga reebo kulanka erotic.
Waxaas oo dhami isaga ayay leeyihiinxeerarka, muujinta kalgacalka iyo erotic-ka jirka ka baxsan, laakiin sidoo kale maskaxda.
Tilmaamaha lagu soo celiyo rabitaanka galmada
Aan aragno maxay yihiin tilmaamaha ugu muhiimsan ee lagu soo ceshan karo rabitaanka galmada ee lamaanaha deggan ee leh dhibaatooyinkan. Midka ugu horreeya waa in la yareeyo buuqa iyo welwelka badan. Inteena ugu badan waxaynu ku nool nahay xawaare nololeed oo siyaadiya isgaadhsiin la’aanta lamaanaha isla markaana ka qayb qaadata luminta rabitaanka galmada. Haddii aad xilligan la joogto lammaanahaaga, waxaa fiican inaad bilowdo ka hadalka dhibaatooyinka. Wadahadalku waa inuu noqdaa mid wax ku ool ah haddii aad rabto wada hadal inuu dhaco. Waxaa jira lamaanayaal iyagu sheega in ay waxbadan isla hadlaan laakiin sifiican iskama fahmaan ama isma dhageystaan. Waxaa la dhihi karaa isku luqad kuma hadlaan.
Waa inaad adiga un noogu badashaa annaga. Markii aan tixraacno, waxay la xiriirtaa wada shaqeynta iskaashiga lamaanaha. Sidoo kale waa muhiim in aan lagu riixin mowduuca. Ka fogow dhammaan eedda dhacdooyinkii hore oo dooro waqti fiican oo aad ku soo qaadatid. Way ku habboon tahay in laga fogaado isgaarsiinta marka xukunka mid ama labadaba ay ku xiran tahay shucuur halkii sabab looga dhigi lahaa. Fureyaasha kale ee la siin karo noocyadan lammaanaha ah ayaa ah ogaanshaha sida loo weydiisto saamaxa oo si cad ugu hadlaan. Waa inaad barataa dhageysiga oo aadan guud ka dhigin dabeecadaha lamaanaha.
Dhiirigelin iyo isku kalsooni badan
Inta badan kiisaska rabitaanka galmada vega waxay laxiriiraan la'aanta kicinta. Waxyi iyo mala awaal waa in lagu quudiyaa aqrinta sheekooyinka erotic, ciyaaraha sida urta, filimada erotic-ka ah sida lamaanaha, iwm Waa inaad kicisaa maskaxda si ay u dhaliso rabitaan galmo. Isku kalsooni la'aantu waa qodob kale oo khatar ah oo kordhiya muuqaalka dhibaatooyinka galmada ee lamaanayaasha.
Waa inaad isu soo dhowaataa naftaada si aad u bilowdo hagaajinta hankaaga. Waad ku garan kartaa wanaaggaaga iyo wanaagga ay u qabaan ficilladaada wanaagsan adoo xafidaya joornaal kaa qoraya waxyaabaha wanaagsan ee adiga kugu saabsan. Dhamaadka maalinta, dib u eeg maskaxdaada ama qoraal ahaan wixii aad si fiican u qabatay. Caadi ahaan waxaan sameynaa ka soo horjeedka. Waxaan badiyaa muujineynaa wixii ugu xumaa ee maalintii dhacay. Tani waxba noo tari mayso, laakiin inbadan ayay ina burburin doontaa. Dadka qaar ma awoodaan inay xakameeyaan oo ay aqbalaan waxa ka socda hareerahooda. Iyadu, mararka qaarkood way kafiican tahay inaad u tagto takhasusle si uu kaaga caawiyo xalinta dhibaatooyinkaaga qanacsanaanta shaqsiyeed.
Si loo ilaaliyo ololka iyo rabitaanka galmada, waxaa fiican inaad ka baxsato waxyaabaha jira. Si tan loo sameeyo, waa inaad wax cusub abuurtaa si aad u hesho dareemo wanaagsan. Galmadu sidoo kale waxay saameysaa hawl maalmeedka. Nolosha labada lamaane waxay noqon kartaa mid loo maro nidaam joogto ah oo horseeda cunto xumo. Sidaa darteed, waa inaad mala-awaalkaaga gelisaa arrinta oo aad waxyaabo cusub isku daydaa.
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad wax badan kaga baran karto rabitaanka galmada iyo astaamaheeda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Ku habboon » Lamaanaha iyo Galmada » Rabitaanka galmada
Faa'iidooyinka ugu yaabka badan ee siigaysiga